Allgedo.com » Ugaas Maxamed Ugaas Xasan Yarow iyo wafdi uu hogaaminaayo oo maanta Kismaayo lagu soo dhaweeyay
Ugaas Maxamed Ugaas Xasan Yarow iyo wafdi uu hogaaminaayo oo maanta Kismaayo lagu soo dhaweeyay
Print here| By: allgedo.com: Tuesday, December 27, 2016 // u Jawaab
Masawirkaan, ninka dhinaca midig xiga waa Ugaas Maxamed Ugaas Xasan Yarow, masawirkana waxaa laga qaaday intii ay ku jireen gegida diyaaradaha caalamiga ah ee Aden Cabdulle Cusmaan ee Muqdisho.
Kismaayo, Somalia (AOL) – Xubno dhaqan oo uu horkacayo Ugaaska guud ee beelaha Xasan Gaashireedle, Ugaas Maxamed Ugaas Xasan Yarow oo galabta galinkii danbe kasoo kicitimay Muqdisho ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo.
Ugaaska iyo wafdiga oo intii muddo ah howlo shaqo u joogay Muqdisho ayaa waxay maanta dib ugu laabteen Kismaayo oo ay todobaadkii hore ka yimaadeen.
Dib ugu soo laabashada Kismaayo ee Ugaas Maxamed iyo wafdigiisa ayaa waxay la xariirtaa sidii ay uga qeyb gali lahaayeen shirar muhiim ah oo ay beelaha Xasan Gaashireedle maalmaha soo socda ku yeelan doonaan magaalada Kismaayo.
Cabdifataax Macalin Cismaan, Kismaayo-Somalia.